China atody farmpacker orinasa sy mpamatsy | Min-Tai
a) Ity masinina ity dia afaka mifandray amin'ny rafitra fanangonana atody afovoany na ny tsipika famokarana fanadiovana atody; b) Ny lanjan'ny atody sy ny fonosana ho azy no amaritana azy, ary manitsy ny ampahany betsaka, tsara amin'ny fitehirizana atody; c) Mety amin'ny lovia taratasy 6 * 5 = 30 na lovia vita amin'ny plastika izy io; d) afaka misafidy fandefasana mandeha ho azy na fandefasana tanana ianao;
Fonosana mandeha ho azy atody afaka mifandray amin'ny rafitra fanangonana atody afovoany na ny tsipika famokarana fanadiovana atody.
1, toetra mampiavaka:
a) Ity masinina ity dia afaka mifandray amin'ny rafitra fanangonana atody afovoany na ny tsipika famokarana fanadiovana atody;
b) Ny lanjan'ny atody sy ny fonosana ho azy no amaritana azy, ary manitsy ny ampahany betsaka, tsara amin'ny fitehirizana atody;
c) Mety amin'ny lovia taratasy 6 * 5 = 30 na lovia vita amin'ny plastika izy io;
d) afaka misafidy fandefasana mandeha ho azy na fandefasana tanana ianao;
2, ny asa:
a) Mpampita tsanganana: atody avy amin'ny atody fehikibo afovoany noentina amin'ny latabatra iray manontolo, amin'ny filaharana milamina ny atody iray manontolo, ny fandefasana amin'ny dingana manaraka;
b) Fanitsiana atody: hitazona ny atody hitodika hatrany ny masinina, ny lafiny lehibe miakatra, izay afaka miantoka ny fihavanan'ny atody;
c) Fitaovana fanangonana atody: mba hifanaraka amin'ny famaritana isan-karazany, ireo fitoeran-atody atody, apetraka moramora ao anaty lovia atody izy ireo;
d) Fanaterana lovia atody: Raha ny zava-misy marina dia azo zaraina ho karazana automatique sy manual ny atody atody roa;
e) Ny fanaterana ny vokatra vita: Aorian'ny fametrahana ny atody amin'ny fehikibo, dia afaka manangona amin'ny alàlan'ny palletize manual na automatique izy;
f) Rafitra fanaraha-maso: Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny efijery mikasika ny efijery, apetraho ny famokarana fitaovana, ary ao amin'ny tranom-biby tsy misy fangarony isaky ny famokarana akoho.
2, masontsivana ara-teknika
Atody / ora 60000
9900MM * 6000MM * 1900MM
Previous: Masinina fanoratana sy fanangonana atody
Manaraka: Masinina fonosana atody
Masinina fonosana atody
Milina fanangonana atody
Masinina manendaka atody nandrahoina, Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina fonosana atody, Hatching atody Packer, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina manasokajy sy milina fanangonana,